Olona khetho lufanelekileyo lweenoveli eziyimfihlakalo
Ukuphononongwa kwenoveli eyimfihlakalo
I-Ink enovelwano, nguPatrick Modiano
Kwityala layo elingapheliyo ngenkulungwane yama-XNUMX. Ixesha eliya likhula ngamabali amnandi njengoko sihamba ngexesha, uModiano usikhokelela kwiyelenqe eliphinda liphinde liphinde licinge le ngcamango ye-ephemeral. Kumbono womkhondo onokwenzeka esinokuthi, okanye...
Ilifa likaMaude Donegal. Unyana Osindileyo: Iinoveli ezimbini eziyimfihlelo, nguJoyce Carol Oates
Kukho ababhali abagqithisa kudidi abazibandakanya kulo kwinoveli nganye entsha. Le yimeko ye-Oates kwaye yenzeka ngale pakethi yempefumlelo edakumbisayo kodwa ecinga indlela epheleleyo yokufikelela kwinqanaba lokugqibela lokufa, kwiinzame zonxibelelwano lokomoya kunye nabo ...
Umqondiso woMnqamlezo nguGlenn Cooper
Kwakukudala ndadibana nebali malunga namabala obuKristu ahlala ekhomba amandla angaphezu kwendalo njengenkumbulo ye-atavistic yabo banyulwe nguThixo. Ke kufanelekile ukukhomba eli yelenqe ukuba namhlanje lifumana imeko entsha yobungcwele obuphuculweyo, yokuzikhethela ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo nguJulián Sánchez
Ukukwazi ukufumanisa okwenzekayo phantsi kweentonga kumdlalo webhasikithi kufuna uxinzelelo kunye nobuchule obuyimfuneko ukuze kufunyanwe eso sandla sibetha ingalo yomchasi endaweni yebhola. Okanye ukuba iplagi yendlela esezantsi yebhola engasebenziyo ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo ze Agatha Christie
Kukho iingqondo ezizodwa ezinakho ukubuza amawaka kunye nesiza esinye kunye nemfihlelo yazo ehambelanayo ngaphandle kokudinwa okanye ukuguga. Ayinakuphikiswa ukwalatha kuyo Agatha Christie njengokumkanikazi wohlobo lomcuphi, owathi kamva wadibana neenoveli zolwaphulo-mthetho, imincili kunye nokunye. Uyedwa, kwaye ngaphandle koncedo olukhulu lwabo bonke ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo kakhulu nguCarlos Ruiz Zafón
Emuva ngo-2020, omnye wababhali abakhulu kwizinto nakwimo wasishiya. Umbhali oye waqinisekisa abagxeki kwaye wafumana ukuvunywa okufanayo okudumileyo kwaguqulelwa kubathengisi abagqwesileyo kuzo zonke iinoveli zakhe. Mhlawumbi oyena mbhali weSpanish ofundeka kakhulu emva kweCervantes, mhlawumbi ngemvume ye…
Iincwadi ezi-5 ezilungileyo ze Javier Sierra
Thetha nge Javier Sierra Kuthetha ukungena kweyona nto ithengiswa kakhulu eyenziwe eSpain. Lo mbhali waseTeruel uye waba ngumthengisi weencwadi zakhe eSpain nakwihlabathi liphela. zonke iincwadi ze Javier Sierra banikezela ngetyala eliqhelekileyo lemisebenzi eyimfihlakalo enkulu, enika umdla ...
Akunakuze uKen Follett
Kubonakala ngathi uKen Follett ngaphambi kweentsomi zembali ubuyile. Kwaye oko kubuyela umva okusibeka kude kwiminyaka engama-90. Ixesha elifanelekileyo labo kuthi sele bekwiminyaka engacingekiyo. Kungenxa yoko le nto kuthi kuthi abo sele befundile uKen Follet ngaphambili ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha10 Elandelayo →